I-Pokémon Go ihlaziywa kwaye ibandakanya iipokémon ezintsha ezingama-50 | I-Androidsis
UEder Ferreño | | Imidlalo ye-Android, Lines Go, Tutorials
IKrismesi phantse iphakathi kwethu, ke lixesha lokuba Uhlaziyo olutsha lwePokémon Go. I Umdlalo kaNiantic unamahla ndinyuka amaninzi oko yasungulwa. Nangona kunjalo, kubonakala ngathi ukuthandwa kwayo bekuzinzile ngokuhamba kwexesha. Umdlalo weNiantic ngoku ubhengeza uhlaziyo olutsha.
Njengesiqhelo kolu hlobo lohlaziyo, izinto ezintsha zifika kumdlalo. Phakathi kwabo sifumana ukubandakanywa kwamarhamncwa amatsha kumdlalo. Ukongeza kwinto entsha enomdla enje iimeko zemozulu ezintsha. Siza kukuxelela ngakumbi malunga nezi ndaba zingezantsi.
Ziindaba zokuba abasebenzisi bomdlalo bebelinde ixesha elide. Ke kubonakala ngathi I-Pokémon Go ifuna ukunika abalandeli bayo isipho esincinci seKrisimesi Ngaphambili. Ngokufanelekileyo eyona nto ibalulekileyo kukufika kwesizukulwana sesithathu se pokemon kumdlalo.
Itotali engama-50 eepokémon yesi sizukulwana sesithathu ifakiwe kuyo. Esi sizukulwana sihambelana nommandla waseHoenn, omnye wemidlalo ye I-Pokémon Ruby, iSapphire kunye ne-Emerald. Nangona kunjalo, ukuza kuthi ga ngoku akukatyhilwa ukuba yeyiphi eyona pokémon izakufika kumdlalo. Sicinga ukuba iya kuba yinto abaza kuyityhila kungekudala.
Olunye uhlobo olutsha oluza ePokémon Go yimozulu ngexesha langempela. Ngale ndlela, ifuna ukuphucula amava omsebenzisi. Ukuwa kwekhephu, ilanga eliqaqambileyo, imvula okanye amafu angena. Ke le izakuba ne Impembelelo ngqo kwiindidi ze pokemon eziza kubakho ngela xesha. Kuxhomekeke kwixesha abaya kuba lilo okanye elinye. Ngaphandle kokuba ifuthe ekulweni.
Kulindelwe ukuba ezinye iindaba ziza kwiPokémon Go. Nangona kude kube ngoku azange zityhilwe, ke kuya kufuneka silinde ithutyana ukubazi. Kulindelwe ukuba Uhlaziyo luza kwi-Android kunye ne-iOS kule veki iphela. Ucinga ntoni ngezi ndaba?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Lines Go » I-Pokémon Go ihlaziywa nge-50 yePokémon entsha kunye nemozulu
Isamsung ikhokelela kuluhlu lweenkampani ezithengisa ezona fowuni kwihlabathi liphela